Leyonsteel dia manolo-tena tanteraka amin'ny paikady fanandramana vaovao sy havaozina vaovao. Ny orinasanay dia mikasa hatrany ny hanomezana ny mpanjifantsika amin'ny fantsom-pamokarana feno solika sy lafo vidy. Manatanteraka hentitra ny fepetra fanaraha-maso kalitao izahay.
Nametraka fifandraisana maharitra nandritra ireo mpamatsy vy vy efa be mpitia isika, izay manampy anay hahazo ny fitaovana mivalana mifaninana indrindra.
Noraisinay ny fitaovana famokarana efa mandroso indrindra eran-tany izay manome antoka ny famokarana vy Fittings. Manofa ny mekanika faran'izay manintona indrindra izahay ary mampiofana ny mpiasa aminay amin'ny fandrefesana araka ny tokony ho izy.
Manao fitiliana 100% izahay mandritra ny famokarana sy ny fisavana 100% alohan'ny fanaterana azy ireo.
Leyonsteeldia manana mpiasa 246 mifantoka amin'ny fanaraha-maso kalitao. Io dia ampiarahina amina mpiasan'ny injeniera 35 sy matihanina ara-teknika, izay za-draharaha amin'ny famoronana valve ary zahana iray hafa kosa ao amin'ny rafitra fanaraha-maso kalitao be dia be. Ireo injeniera ireo dia manam-pahaizana manokana amin'ny fampivoarana ny vokatra, ny fikarohana ary ny fifehezana kalitao, ary singa manan-danja amin'ny ekipa mpanohana ara-teknika mpanjifa.
Manohana ireo mpiasan'ny QC mahery izahay, azo antoka foana ny kalitaon'ny vokatra ataontsika. Ny vokatra azontsika dia 100% nojerena alohan'ny ahidiana sy alefa. Izahay koa dia manaiky izay fizarana fanadinana fahatelo notendren'ny mpanjifantsika, toy ny TUV, DNV, BV, SGS, IEI, SAI sy ny hafa. Ny antoka azo antoka dia raisina manerana ny fizotrany rehetra avy amin'ny fividianana akora madiodio amin'ny fanodinana, ny fonosana, ny fitahirizana ary ny fitaterana. Ny dingana tsirairay dia mifanaraka tsara amin'ny ISO 9001: 2008. "Quality Voalohany" dia fampanantenantsika mandrakizay amin'ny mpanjifantsika rehetra.
Leyonsteel dia nandray anjara amin'ity sehatra ity nanomboka tamin'ny 1985. Manana traikefa be amin'ny fantsom-by fantsona izahay. Ny lesona ianarana avy amin'ny asa teo aloha tao anatin'ny taona lasa dia mahatonga antsika hifaninana bebe kokoa amin'ity tsipika ity. Takatray ny zavatra ilainao, ary afaka manatanteraka ny fahafaham-ponao.